ME HANITRA : Tsy mipetrapetra-potsiny ny movansy Ravalomanana fa efa maka fepetra rehetra ary mampahafantatra ny olona ny zavatra misy. – MyDago.com aime Madagascar
Tetsy amin’ny LMA Ampefiloha, biraom-pifidianana laharana faha 2 no nanantanterahan’ny Me Hanitriniaina Razafimanantsoa sy ny vadiny ny adidiny amin’ny fifidianana filohampirenena fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavambahoaka. Tamin’ny 10ora sy 35mn no nigadona teny an-toerana izy ireo. Nambarany tamin’izany fa matoky ary mino fa mandresy na Dr Robinson na ny Me Hanitra kandida solombavambahoaka laharana faha 6 eto amin ‘ny boriborintany voalohany. Momba ireo zavatra mitranga amin’ireny biraom-pifidianana manerana ny nosy dia nilaza izy fa efa naka ny fepetra ny movansy Ravalomanana sy ny Dr Robinson . Marobe hoy izy ny toromarika omenay amin’ny zavatra rehetra izay mitranga, ohatra ny boriborintany voalohany sy fahadimy , tara ny fahatongavan’ny bileta tokana ho an’ny depiote. Ireny hoy izy dia efa nojerena manokana sy efa nanaovana antso tany amin’ny Ceni-T.Efa nomena toromarika ihany koa ny delege hanoratra ireny any amin’ny PV fa ny zavatra maika dia ny hisian’ireny bileta tokana ireny. Misy indray amin’ny toerana sasany toy ny tao Amparibe omaly dia nisy sefom-pokontany izay mamo dia nanimba fitaovana sy naniratsira ny Ceni-T, eo ihany koa ny bileta efa vita couché tao Ambalavao Isotry ka natakalo vola 5000ariary. Tetsy Antohomadinika dia nisy ihany koa ny fahataran’ny bileta tokana ho an’ny depiote, kanefa dia nalefan’ny filohan’ny biraom-pifidianana ihany ny fifidianana. Tany amin’ny faritra hafa dia nisy ny dahalo ka tsy afaka nifidy ny olona. Noho izany ny movansy Ravalomanana dia tsy mipetrapetra-potsiny tamin’ity indray mitoraka ity fa maka fepetra rehetra ary mampahafantatra ny olona ny zavatra misy. Arakarak’izay ihany koa ny fitarainana sy ny fitoriana ataonay any amin’ny CES.
Me Razafimanantsoa Hanitra : Ny movansy Ravalomanana dia tsy miova fa i Neny ihany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 20 décembre 2013 20 décembre 2013 Catégories Politique
5 réflexions sur « ME HANITRA : Tsy mipetrapetra-potsiny ny movansy Ravalomanana fa efa maka fepetra rehetra ary mampahafantatra ny olona ny zavatra misy. »
CENI-T mira Comité Elecetoral Nul et Incapable – T.Y !!
Payés plus de 7000 dollars par mois, pour .. une organisation minable des élections
Avereno ny volam-bahoaka !!
Izao koa no azo lazaina hoe « Enrichissement personnel sans causes, et non mérité »
20 décembre 2013 à 13 h 30 min
tsy maka afo @ maty ve raha ny CES sy CENIT no hianteherana @’izany???
rehefa tafavoaka indray ny rėsultat vao hamoaka fanambarana izy???tokony tonga dia hidinana
am-pontony mihintsy manery izay tompon’andraikitra @’izany toerana izany.INONA ARY ITY!!!
Tsy lehibem-pokontany foza izany mamo izany ???tsy mahagaga!!!mamato-tena i JODASY!
ho very fihinanana koh
20 décembre 2013 à 20 h 23 min
Ny ara dalana miaraka @ Me Hanitra ihany na ho faty aza ???
21 décembre 2013 à 9 h 29 min
Ary mba nanao ahoana ny vokatra tao amin’ny boriborintaniNAO tao ê ? Sa dia tsy nisy délégués koa ny birao rehetra ?
21 décembre 2013 à 23 h 02 min
Mazava aminizay ny tetiky ny foza : Mody izay birao nahazoan’i Hery ihany no avoaka dia avy eo tady amboharina ny ambiny! Mazava be: nahoana ny birao eto antananarivo akaiky kely eo, azo andehanana tongotra… nahoana no ao @ siten’ny Cenit no milaza fa mbola tsy tonga ihany ireo hatr@izao…nefa à 15min andehanana tongotra!!! Inona no antony??? Ao ilay halabato!!! Dia mody alefa ao amin’ny vaovao foana hoe Hery no mitarika mba hanamboarana ny sain’ny olona aminilay halabato!!!Ka ny cenit koa no miray tsikombakomba amin’ny hery ao. Efa nolazaiko teto foana fa conseillère an’i Hery taloha io Beatrice Attalah io ary natao président an’ny Cenit. Dia milaza moa ireo hoe misy solotenan’ny mouvance ra8 ao… Ka nahasay ve ireo hoe io réprésentant io no natao président Cenit??? Président tsy mitovy amin’ny membre tsotra!!! Ary enga anie ka hisy ahatsikaritra ny halabaton’io ramatoa io mba ahamora n fidirany eny tsiafahy.
Précédent Article précédent : OMER BERIZIKY : NIVOAKA TAMIN’NY FAHANGINANA
Suivant Article suivant : LALAO RAVALOMANANA : NANEFA NY ADIDINY VAO MARAINA